कार रिकर्डर DOD F900LHD: समीक्षा र सुविधाहरू
निरीक्षकों यातायात प्रहरी - सडकको मालिक। तर त्यहाँ विवाद हो भने, कानून-पालन चालक सधैं छ जो साक्षी, आफ्नो मामला प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। बाटोमा हुन्छ कि सबै कुरा रेकर्ड कि कार DVR - धेरै F900LHD भयो।
यो प्राविधिक उपकरणमा लिखित डाटा, अक्सर देख्न सकिन्छ युट्युब भिडियो साझेदारी साइट मा, तर पनि सडक मा स्थिति मा विशेष टिभी परियोजनामा मात्र छैन।
हालै एक दृढ «DOD» उत्पादन जो यन्त्र, counterfeiting। सस्तो प्रतिहरू को आगमन छवि F900LHD गम्भीर बिगार्न। रजस्ट्रार को समीक्षा थप र थप नकारात्मक छन्। क्रममा लागि disgruntled गर्ने उपकरणको «DOD» मात्र आधिकारिक प्रतिनिधिको किन्न प्रयोगकर्ताहरूको बाँध्न सामेल छैन। को "कहाँ खरीद गर्न" मा ठेगाना र विशेष केन्द्र र अनलाइन स्टोर मूल आधिकारिक प्रमाणित उत्पादन बेच को टेलीफोन नम्बर, "को DOD टेक" को रूसी भाषाको पृष्ठमा पाउन सकिन्छ। यो स्रोत आफ्नो पाठकहरु र शीर्षक अन्तर्गत पृष्ठ खुसी कि उल्लेखनीय छ "किन्न छैन कहाँ।" म एक अन्तरक्रियात्मक खण्ड समर्पित F900LHD हेर्न चाहन्छु। प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया सम्भव यसलाई किन्न चाहने ती लागि मूल उपकरण मूल्याङ्कन बनाउन थियो। यद्यपि, यो रूस मा कम्पनी प्रतिनिधिहरूको आफ्नो सम्पर्क जानकारी प्रकाशित भनेर एक नक्कली किनेको जहाँ, कुराकानी गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रोत्साहन छ।
ताइवानी मूल DOD F900LHD, पनि ट्राफिक प्रहरी द्वारा कार्यालय को दुरुपयोग सम्बन्धित अवस्थामा ह्याण्डल गर्ने न्यायाधीश थाहा आज आफ्नो ध्यान गर्ने प्रस्ताव छ कि सुविधाहरू सिंहावलोकन।
प्राविधिक डिजाइन एकल च्यानल, छ, तपाईं मात्र एक कोठामा मार्फत घटनाहरू रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ छ।
को DVR एक निर्मित माइक्रोफोन र एक घुमाउँदा प्रदर्शन छ।
विस्तृत-कोण लेन्स तपाईं एक सय र बीस डिग्री को एक राम्रो सिंहावलोकन दिन्छ। F900LHD बारेमा सामान्य मा जो लेखिएको छ, लेन्सको समीक्षा प्राय सकारात्मक छन्। यो ओप्टिक्स स्पष्ट कार वरिपरि के भइरहेको छ, र शूटिंग लामो-दूरी अलिकति मात्र किनाराको मा छवि distorts कब्जा। तर यो को कमी छ वाइड कोण लेंस। रजस्ट्रार को निर्माताहरू र इलेक्ट्रनिक नकारात्मक ओप्टिक्स क्षतिपूर्ति।
बाह्य, यन्त्र भिडियो क्यामेरा मिल्दोजुल्दो छ। अक्सर गलत हो F900LHD समीक्षा मा किन सायद छ। केही यो मोडेल त्यहाँ कार रिकर्डर को मुख्य विशेषताहरु पनि यद्यपि, Camcorder यसलाई classifies: रेकर्डिङ बित्तिकै बाह्य शक्ति आपूर्ति रूपमा सुरू हुन्छ, र cyclical छ।
स्क्रिन रिकर्डर तीन सय र साठी डिग्री घुम्यो गर्न सकिन्छ। ओप्टिक्स एक सय र असी डिग्री गर्दछ।
लेन्सलाई एकाइ राम्रो छ क्षेत्र को गहिराई। Semimillimetrovaya लेन्स अनन्त गर्न दस सेन्टिमिटर को दायरामा संचालित।
इलेक्ट्रनिक्स र मेकानिक्स सुविधाहरु मा एक चार गुना वृद्धि प्रदान गर्नुहोस्।
सानो सहायक चालक को गाडीको अगाडीको शिशा गर्न चूषण कप संलग्न भएको एक विशेष कोष्ठ छ।
गति डिटेक्टर आरक्षित rechargeable लिथियम-आयन ब्याट्री बचाउँछ।
मूल registrar लिन्छ कि गुणस्तर पूर्ण-स्क्रिन भिडियो वास्तवमा, तपाईं यसलाई रूस मा कम्पनी को आधिकारिक प्रतिनिधि को साइट उदाहरण मा देख्न सक्नुहुन्छ।
के फ्रिज प्रदर्शन हुन्छ?
L800 EPSON: मुद्रण उपकरण, यसको सुविधा र विनिर्देशों को समीक्षा
दीपक "प्लाज्मा बल" - उद्देश्य र सञ्चालनको सिद्धान्त
Breadmaker रेडमन्ड RBM-M1907: प्रयोगकर्ता पुस्तिका, समीक्षा
आईएमईआई कोड: यो के मतलब
Crosby (जूता): समीक्षा, निर्माता। ट्रेकिङ जूता
Enteric दाना "Rovatineks": प्राप्त समीक्षा, वर्णन, संरचना र निर्देशन पछि
जर्मनी को र्शतहीन आत्मसमर्पण को कार्य हस्ताक्षर। दोस्रो विश्व युद्ध को इतिहास
कब्जियत लागि प्रभावकारी उपचार। वयस्क मा कब्जियत लागि उपचार
होटल रोड्स 'Faliraki बीच4"। विवरण
चरणमा आफ्नै हातले देश मा तहखाने (फोटो संग निर्देशन)
बिहान risers, वा स्वभाविक erections। कारण के हो?
साइन "कुंभ" साइन मा विभिन्न डाटा: मितिहरूको जो भित्र को संख्या
ओम्स्क रिफाइनरी - कम्पनी को एक सहायक "Gazprom Neft"